I-Shire of Dream 3, Cabaña Enkosi - I-Airbnb
I-Shire of Dream 3, Cabaña Enkosi
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMark
Kwingingqi yethu uza konwabela izindlu zamaplanga ezikhethekileyo, ezenzelwe ukuphumla nokudibana nendalo. Ngena kwihlathi lethu lasekuhlaleni, kwaye uthe zava ebhedini yakho wonwabele ilanga elinemibalabala kunye neendawo ezintle zeTominé Dam. Asiyiyo ihotele, kodwa uza kufumana zonke izinto ezinokusetyenziswa neenkcukacha ukuze uphumle uze ube nexesha elimnandi elingasoze lilibaleke. Ukuze ufumane imali eyongezelelekileyo, ibe kuxhomekeka kwimvume yombuki zindwendwe, izilwanyana zakho zamkelekile.
I-Comarca yethu iphakathi ehlathini lendalo, ineendlela zendalo kunye neegadi ezifihlakeleyo zokucingisisa, ukuphumla nokuhamba ngeenyawo. Indlu yamaplanga yenziwa ngezinto ezilungele indalo; ifudumele kakhulu ebusuku ibe iyibona kakuhle iCrystal; ikhethekile ibe iza kukuvumela ukuba ucinge ngeenkwenkwezi uthe zava ebhedini yakho; ukuba uyafuna, vula indawo yokubasa umlilo, wonwabele ibhedi ekuthiwa yi-hammock, uze uvumele indalo ikukhuthaze. Izinto eziyimfihlo nokuzola kuqinisekisiwe. Singenza amalungiselelo okuhamba. Ukuba unqwenela, ababuki zindwendwe bethu be-canine kunye ne-feline bangahamba nawe. Uza kubona ii-paragliders esibhakabhakeni ngoxa wonwabele ipikniki esiza kuyilungisa kwangaphambili nangexabiso elifikelelekayo. Khumbula ukuba sinako ukunceda ngeziganeko zakho: ukukhwela ihashe, i-paragliding, kunye nokundwendwela iidolophu ezikufutshane (i-Sopó, i-Guatavita, i-Guasca, kunye ne-Zipaquirá) kunye nabasebenzisi bengingqi. Ukuba unabantwana okanye iindwendwe ezongezelelekileyo, sinokulungiselela oomatrasi abongezelelekileyo. Iintsapho nazo zamkelekile.
Kukho i-paragliding kwimizuzu emihlanu ukusuka kwindlu yamaplanga. Sinokulungiselela ukukhwela ihashe labucala eliza kukuthatha kwindlu yamaplanga. IPionono Natural Park ikumgama wemizuzu eyi-20 xa uhamba ngeenyawo. Ikude ngemizuzu eyi-30 kuphela ngemoto, yonwabela imarike yezinto eziphilayo eGuasca, eGuatavita, nakwindawo yayo. Ukuba uyathanda, iParque sopó okanye iCabaña Alpina ikumgama wemizuzu elishumi. Nangona unzulu ehlathini, yenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi ngokutya okuninzi, ukutyelela iidolophu ezikufutshane, okanye uhambe ehlathini.
Siyayixabisa into yokuba wedwa. Ngoko ke, siyayihlonipha indawo yakho nokuthi cwaka; kodwa ke, siya kukukhokela kwaye sisombulule nayiphi na inkxalabo.
Inombolo yomthetho: 70501